Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal
Ubuntu 12.10 Yakawanda Quetzal akaona mwenje mazuva mashoma apfuura. Sezvatinoita nekusunungurwa kwega kwega kunozivikanwa distro, heano mamwe zvinhu zvaunofanira kuita mushure mekugadzira kuisirwa kubva pakutanga.
Zvichida kuti mushure mekunge Ubuntu 12.10 yaburitswa, mitsva inogadziridza yaonekwa pamapakeji akasiyana ayo mufananidzo weIO wakaparadzirwa neCanonical unouya nawo.
Mamwe makadhi emifananidzo eATI haashande neUbuntu 12.10 kunze kwekunge iwe uchishandisa iyo ATI "nhaka" madhiraivha uye kudzikisira pasi server X. Kana zvichidikanwa, iwe uchakurumidza kuziva kuti nei Ubuntu isinga bhure zvakanaka. Kuti uigadzirise, mhanyisa unotevera mirairo:
Kunyangwe ini ndisingazvikurudzire, pamusoro pekushandisa iyo Hardware Kugadziridza Chishandiso kuisa madhiraivha ekadhi rako remifananidzo, zvinokwanisika kuzviisa kuburikidza nePPA yakagadzirirwa izvi
Chenjerera: vamwe vashandisi vakashuma a mhosho izvo zvinoita kuti zvisakwanise kushandisa Kubatana mushure mekuvandudza nVidia madhiraivha. Gadziridza panjodzi yako wega. Seizvo vamwe vevaverengi vedu vataura, kuti tirege kukanganisa uku, iwe unongofanirwa kuisa iyo linux-misoro-generic package kutanga.
Iyo inochengeterwa mapakeji esoftware ayo asingakwanise kuverengerwa mukuparadzirwa kweUbuntu nekuda kwezvikonzero zvakaita semutemo copyright, marezinesi kana kurambidzwa kwepatent. Inosanganisira zvirongwa zvakaita se: Google-Earth, Opera, Win32codecs, Msfonts.
sudo -E wget --output-gwaro = / etc / apt / sources.list.d / medibuntu.list http://www.medibuntu.org/source.list.d/ $(lsb_release -cs) .list && sudo apt-tora - runyararo gadziriso && sudo apt-tora - hongu --quiet --allow-unuthenticated gadza medibuntu-keyring && sudo apt-tora - runyararo gadziriso
Kuti uwedzere iwo Medibuntu mapakeji muUbuntu Software Center:
sudo apt-tora kuisa app-gadza-data-medibuntu apport-zvikorekedzo-medibuntu
sudo yekuwedzera-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu yakawanda" sudo apt-tora sudo apt-tora kuisa mate-archive-keyring sudo apt-tora sudo apt-tora gadza murume-musimboti wemukadzi-desktop-nharaunda
Rondedzero yakakwana yezvinyorwa zvinokurumidza, pamwe nerondedzero pfupi yekumisikidza kwavo, inowanikwa pa Bvunza Ubuntu.
Iwe uchazokwanisa kuwana ruzivo nezve izvo zvitsva muUbuntu 12.10 uye ruzivo nezve mashandisiro ekutanga iyo launcher kutanga maapplication (izvo zvinogona kuvhiringidza kune avo vasina kumboshandisa Unity), kutsvaga kwekushandisa, mafaera, mimhanzi uye zvimwe zvakawanda naDash, sei gadzirisa mashandiro uye marongero nebaru yemenu, maitiro ekuvhara chikamu, kudzima kana kushandura vashandisi uye yakareba etcetera.
Enda kuUbuntu 12.10 desktop dhairekitori
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal
Ciro Mufaro akadaro
Ini handikwanise kuisa xpenguins; kunyangwe ini ndatoisa iyo kuburikidza neiyo ubuntu 12.10 software Center
Pindura Ciro Alegría
Linez Linux akadaro
Dambudziko nevatyairi veNvidia imhaka yekuti ivo havana kuwedzera iyo linux-misoro-generic package kune zvinoenderana
Iyo inogadziriswa nekuisa iyi pasuru pamberi pevatyairi.
Pindura Linez Linux
Iwe uchangobva kupotsa iyo Libreoffice yatove kutsigira iyo yepasi menyu.
Ndine dambudziko ne youtube mu ubuntu12: ini ndinowana iyo yekare mutambi, ndingaigadzirisa sei?
Pindura kuna ka-el
Gaius baltar akadaro
Iwe uchiri kuona iyo vhezheni vhezheni pachinzvimbo cheiyo HTML5 ... Wakambotsvaga sarudzo dzesarudzo yako yeYouTube?
Pindura kuna Gaius Baltar
Ini ndichangobva kuisa ubuntu 12.10, asi ndine dambudziko, pandinovhura iyo Ubuntu software centre kana kutanga chifananidzo hachina kugadziriswa, ndiko kuti, zvese zvinofamba uye mavara anobuda, uye dzimwe nguva zvinonamira uye ndinofanira kumisazve, ichave mamwe driver driver?
Ndanga ndichishandisa Arch Linux kana Archbang kwenguva yakareba (derivative distro inouya neOpenbox nekutadza).
Pane zvinhu zvishoma zvandisingade nezveUbuntu:
1) Izvo zvakati wandei zvakaoma kugadzirisa kupfuura mamwe ma distros (semuenzaniso Arch Linux uye zvigadzirwa).
2) Ndakaona kuti ini ndoda kuziva mashandiro anoita zvimwe zvinhu (kunyangwe zvichitora nguva yakawanda kugadzirisa) ... uye kwete kuti zvese zvinongoerekana zvaitika (sekufunga kweUbuntu).
3) Ubuntu inorembera zvakanyanya uye haina kugadzikana.
4) Mwedzi mitanhatu yega yega unofanirwa kuisazve.
Ndiine Arch ndinokwanisa kukunda zvese izvo zvipingamupinyi uye ndinogara ndine komputa yangu kusvika pari zvino. Kuisa "zvisingawanzo" mapakeji hazvidi kutsvaga chero maPPA, ingoshandisa AUR. Chokwadi ndechekubwinya ... kunyangwe ini ndichibvuma kuti zvinogona kunge zvichinetsa kugadzirisa kekutanga, mushure mezvo zvinoshamisa.
Dennis Junior akadaro
Chinhu chega Ubuntu chinoshaikwa iOfisi yeMicrosoft, handigone kurarama pasina 2013.
Pindura Dennis Junior
Ivo veMicrosoft vari kufunga nezvazvo ... ichanyatso svika gore ra2015.
Zvakanaka, ini ndiri mutsva kuUbuntu mushure memakore mazhinji nemahwindo anofara andasarudza uye kunyangwe ndichitora mazuva mashoma ndiri kuifarira zvakanyanya asi ndinoda kuti undikurudzire imwe nzvimbo kana dzidziso inondibatsira kugadzirisa matambudziko sekusaziva mapurogiramu andinoisa ari kuenda, ndinokutendai zvikuru uye ndine urombo nekusaziva kwangu
Pindura kune phyto
Ndine dambudziko nedesktop iri mu ubuntu ini ndinopfuudza iyo posvo kubva ku taringa.
Wakanakisa mupiro, ndatenda zvikuru.
Chinja intro. Inoti Ubuntu 12.04
Oops! Ndatenda! Yakagadziriswa. 🙂
Luis Guillermo akadaro
mubvunzo! Chii chandingaite muUbuntu chandisingakwanise kuita muW7? ndeyekuti ini ndiri mutsva kuUbuntu uye ndinoda kuziva zvakawanda
Pindura Luis Guillermo
Ndingati kwete. MuLinux iwe unozogona kuita zvese zvawakaita muWindows. Chinhu chega chakati omei (kunyangwe chiri kuchinja zvakadzikama nekupinda kweStam kuLinux) ndiyo mitambo.
programmer: gnu / linux akadaro
neruremekedzo rwakafanira, asi ubuntu inonyadzisa nekuti haichisiri yemahara x iri kugamuchira software yepamutemo .. !!
Pindura kune programmer: gnu / linux
Mhoro wakadii?? Ndine dambudziko nepakati, pese pandinotangidza komputa kumisikidza kunoonekwa ipapo, handizvitange, uye hakuperi kunyangwe hazvo ini ndakanzura. Handikwanise kenduru. dambudziko nderekuti ini handigone kuisa kana kusunungura chero chinhu kusvikira zvaitwa.
izvi zvakaitika mushure mekuyedza kuisa kudonhedza, kumisikidzwa kwaive chando kumagumo uye hakuna kufambira mberi, ndakaedza kuzvimisa asi ipapo zvakaramba. reboot uye saka ndinogara….
Pindura kuna douglas
Mhoroi, ini handizive kugadzira ubuntu 12.10 (yatove kuiswa kubva kuCD) kuziva iyo USB Internet Kiyi HUAWEI E 173. Ndatenda
Kuenzanisa Tafura: Ndeipi bhurawuza inoshandisa zvakanyanya? Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium kana Opera
SSR: Nyaya yeapuro